Ikhaya Elisha, Elithokomele, Lesimanjemanje e-Rexburg
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Hillary
I-Twinhome entsha ceke ehlanzekile nenethezekile eholidini lakho elilandelayo. Yonke into kuleli khaya yintsha futhi isilungele ukusetshenziswa futhi uyijabulele. Itholakala endaweni ethule, impahla inegaraji lezimoto ezi-2 kanye negceke elibiyelwe ngokuphelele ngemuva. Indawo inemishini emisha, ama-smart TV, i-wifi esheshayo, nesiteshi somsebenzi ukuze ukwazi ukusebenza usekhaya uma kudingeka. Indawo iseduze kakhulu nomgwaqo omkhulu. Leli khaya linezinsiza eziningi zokuhlala okunethezekile isikhathi eside.
Indawo ihambisana nezilwane ezifuywayo. Sivumela inja eyodwa endaweni NGOKUVUMA NGAPHAMBILI kuphela. Sizokwengeza enye inkokhiso engabuyi engu-$100 esiqashisweni ngenyanga, futhi sidinga idiphozithi yesilwane esifuywayo ebuyayo engu-$300 inqobo nje uma kungekho monakalo esakhiweni.
Imali yesilwane esifuywayo kufanele ikhokhwe ngaphambi kokungena
Inja kufanele ibe nobungane futhi iqeqeshelwe indlu. Awekho amaphedi wokuchama avunyelwe.
Inja kufanele igadwe nguwe ngaso sonke isikhathi noma ibekwe uma ishiywe yodwa endlini.
Noma iyiphi inja ephazamisayo kufanele isuswe ngokushesha ngemva kwesicelo soMnikazi.
Uzokhokhiswa nganoma yimuphi umonakalo owenziwe yinja
Unomthwalo wemfanelo wokuhlanza noma iyiphi indle otshanini, okungenani masonto onke nalapho usuphuma.
Lena indawo ethule, entsha e-Rexburg eduze kwesikole i-Madison High School kanye ne-Burton Elementary.
Ngizotholakala ngocingo noma ngombhalo ngaphambi, phakathi, noma ngemva kokuhlala kwakho. Ngiphendula kakhulu futhi ngiyajabula ukukusiza ekuphenduleni imibuzo mayelana nendawo noma imisebenzi ongaba nayo ngenkathi useholidini.
UHillary Ungumbungazi ovelele